पानी को आहार - तनाव बिना5किलो गुमाउनु - सजिलो र सरल
पानी को आहार वा पानी को आहार शायद सबै वजन घटाने आहार को सरल छ। जे होस् यो यो उनको आहार को लागी धेरै गाह्रो छ, किनकि यो मात्र सामान्य चयापचय को बहाली हो र मद्दत संग उत्सर्जन कार्यहरु पानी.
त्यहाँ पानी को आहार को व्याख्या को दुई प्रकार छन् - सरल र अधिक कठोर। तदनुसार, एक कठिन एक संग वजन घटाउन को लागी अधिक ध्यान देने योग्य छ, ती को लागी जो यो कोशिश गरीएको छ, एक साधारण पानी को आहार संग भन्दा।
एक साधारण पानी को आहार खाना मा कुनै प्रतिबन्ध को मतलब छैन, यो हो, तपाइँ बिल्कुल उस्तै तरीकाले पहिले जस्तै, मात्र तपाइँ एक निश्चित प्रणाली अनुसार पानी पिउनुहुन्छ - त्यो पूरै नुस्खा हो।
प्रणाली प्रति दिन कम्तीमा2लीटर सफा पानी को पिउने मा शामिल छ। पानी को मात्रा संग पानी को आहार संग तपाइँको शरीर को आवश्यकता को सही गणना सूत्र को उपयोग गरी गणना गरीन्छ: तौल / 20, त्यो हो, यदि तपाइँ 70 किलो तौल हुनुहुन्छ, तब पानी को खुराक तपाइँ एक आहार को लागी आवश्यक छ3लीटर प्रति दिन। तर पानी अनियमित मा पिएन।
हामी पानी सही तरिकाले पिउँछौं
भोजन को 25 मिनेट पहिले कोठा को तापमान मा एक गिलास पानी पिउन निश्चित हुनुहोस्। खानाको बखत र पछि, पानी र अन्य तरल पदार्थ (जुस, चिया, कम्पोटे, आदि) पिएको हुनुहुँदैन। र पानी को अर्को सेवन १, ५ घण्टा पछि खाना हुनुपर्छ। यो पनि after पछि धेरै खाने को लागी सिफारिश गरीएको छैन, तर यो गणना को दर मा पानी को बाँकी पिउन को लागी राम्रो छ, दिन को समयमा पियेको छैन।
तरल पेय र सूप को अन्य प्रकार गणना मा शामिल छैन।
पानी को आदर्श बिल्कुल सफा, गैर कार्बोनेटेड, गैर खनिज पानी को कुनै additives बिना आवश्यक मात्रा हो। यो या त बोतलबंद पानी वा फिल्टर पानी छनौट लायक छ, ट्याप पानी मात्र तपाइँको शरीर प्रदूषित हुनेछ।
विधि को सार यस तथ्य मा निहित छ कि वास्तव मा हामी पानी को मात्रा शरीर लाई कहिले पिएन, र अक्सर हाम्रो मस्तिष्क "भ्रमित" खाने इच्छा संग पिउने इच्छा र हामी एक पानी को गिलास को सट्टा एक नाश्ता छ ।
खाना पिउन अस्वीकार, हामी खानालाई शरीर द्वारा प्राकृतिक अवस्थामा पचाउन को लागी अनुमति दिन्छौं - गैस्ट्रिक रस को मदद संग, यो पानी संग पतला बिना।
यदि हामी रस वा चिया पिउँछौं, तब हामी पेट मा खाना किण्वन को व्यवस्था गर्दछौं, जसले पाचन र खाना को बिघटन मा एक सुस्तता को लागी नेतृत्व गर्दछ, र यसैले हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ र अधिक वजन को संचय। आवश्यक मात्रा मा पानी हाम्रो आन्द्रा सफा, कोषहरु लाई समय मा आफैलाई नवीकरण गर्न सक्षम बनाउँछ।
पानी मा वजन घटाने परिणाम
आहार पछि, तपाइँ महसुस गर्नु पर्छ कि छाला ताजा र स्पष्ट छ। यस्तो आहार 3-4 हप्ता को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसको प्रभाव प्रति हप्ता कम से कम 2-3 किलो वजन को हुनुपर्छ।
तर यो त्यति सजिलो छैन जति यो नाश्ता पछि एक कप कफी वा दिउँसोको खाना मा एक गिलास रस छोड्न को लागी लाग्छ। सुरुमा, तपाइँ खाना पछि धेरै तिर्खाउन सक्नुहुन्छ।
पटक पटक यो प्यास लाई हटाएर, यो एक बानी बन्नु पर्छ र यो तपाइँको लागी यति गाह्रो हुनेछैन। तपाइँ खाना को बीच हरी चिया वा कफी पिउन सक्नुहुन्छ, तर यी पेय तपाइँको दैनिक पानी को आवश्यकता को लागी गिनती हुनेछैन।
एक अधिक जटिल र कठोर पानी को आहार धेरै पानी पिउने को एक संयोजन हो, आहार प्रतिबन्ध संग (एक दिन5लीटर सम्म)।
तपाइँ एक हप्ता भन्दा बढी को लागी यस्तो आहार मा बस्न सक्नुहुन्न, तर यो एक वजन घटाने आहार को रूप मा अधिक ठोस परिणाम ल्याउँछ। तपाइँ अझै पनी शुद्ध पानी पिउनुहुन्छ, तर एकै समयमा मीठो, नमकीन र स्टार्चयुक्त खानाहरु छोड्नुहोस्।
तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ र पानी को आहार मा खान को लागी
कुटीर पनीर, केफिर, स्याउ, तरकारी र जडी बूटी, अण्डाको जर्दी, एक प्रकार का मासु, दुबला माछा र समुद्री खाना - यो सबै दिन को साना भागहरु मा, पनी र खाना को 25 मिनेट पहिले पानी पिउनु बिना पनि।
यी सबै उत्पादनहरु कम क्यालोरी छन्, तर भिटामिन र शरीर को लागी आवश्यक microelements, जो शाब्दिक एक कठोर पानी को आहार को समयमा शरीर बाट "धोई" छन्।
एकै समयमा, यो कलेजो को समर्थन गर्न को लागी विभिन्न जटिलहरु र प्राकृतिक (अधिमानतः होम्योपैथिक) उपचार मा मल्टीविटामिन वा भिटामिन + खनिज पिउन को लागी आवश्यक छ, एक कठोर पानी को आहार को लागी संक्रमण को लागी यो तनावपूर्ण हुनेछ।
यस प्रकारको आहारले तपाइँलाई प्रति हप्ता 5-7 किलोग्राम गुमाउन मद्दत गर्दछ, उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ चाँडै छुट्टी मा हुनुहुन्छ, र तपाइँको फिगर एक स्विमिंग सूट को लागी "तयार छैन"।
के एक पानी को आहार अन्य प्रकार को आहार संग संयुक्त हुन सक्छ?
यो प्रश्न सबै को लागी एकदम व्यक्तिगत छ, जब दुई कठोर आहार संयुक्त छन्, शरीर गम्भीर तनाव को अधीनमा हुनेछ, जो वजन घटाने को लागी नेतृत्व गर्न सक्दैन, तर रोग को लागी।
याद गर्नुहोस् कि कुनै पनि आहार संग, यो आवश्यक छ कि शरीर को भिटामिन, खनिज र ट्रेस तत्वहरु को न्यूनतम मात्रा संग यो सामान्यतया काम गर्न को लागी अनुमति दिन्छ र न केवल वजन घटाने को रूप मा परिणाम दिनुहोस्।
पछिल्लो कसरी वजन घटाने काम गर्दछ?
अर्को ब्राजिलियन आहार - सजीलै तौल घटाउनुहोस्
85 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,711 प्रश्नहरू।